soft play၊ trampoline နှင့် Ninja သင်တန်းတို့နှင့်မိသားစုဖျော်ဖြေရေးစင်တာ၊ soft play၊ trampoline နှင့် Ninja သင်တန်းတို့နှင့်အတူတရုတ်မိသားစုဖျော်ဖြေရေးစင်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ - Kaiqi
နူးညံ့သောကစားခြင်း၊ trampoline နှင့် Ninja သင်တန်းတို့နှင့်မိသားစုဖျော်ဖြေရေးစင်တာ
Compared with traditional indoor playground, ninja course play center is fitted with more difficult challenging play games. These kinds of play games are mainly designed for 12-15 years old children. and the bottom usually covered with sponge tiles to make sure children can play safely above it. The main play courses will begin from simple, easy to little difficult finally, such as single bridge, hanging rings, climbing walls.. which are illustrated in the design. There are many advantages of this new style play games:
1.Exercise children's physical training.
2. Promote children's intellectual and coordination development.
3. children can meet more friends, enlarge their scale of friends, improve children’s social ability to deal with the relationship among their world.
ကျောင်းများ၊ ပန်းခြံများ၊ အပန်းဖြေစခန်းများ၊ ဟိုတယ်များ၊ တိုက်ခန်း၊ ရပ်ရွာ၊ နေ့ကလေးထိန်းများ၊ ကလေးဆေးရုံများ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ supermarke
မိသားစုဝင်များအားလုံးပျော်ရွှင်ရန်အမြင့်ဆလိုက်များ၊ trampoline ပန်းခြံနှင့်နင်ဂျာသင်တန်းတို့ပါ ၀ င်သောကြီးမားသော indoor ကစားကွင်း